JIZỌS EBILIWO N’ỌNWỤ – hoo!haa!!
JIZỌS EBILIWO N’ỌNWỤ
Kpọm kwem, taa bụ Isita. Taa ka anyị bụ ndi otu Jizọs Kraist n’ebo nile nke ụwaa na-eme ncheta mbilite n’ọnwụ nke onye nwe anyị na onye nzọpụta anyị bụ Jizọs Kraist.
Ọbụrụ na Jizọs biara rụchaa ọrụ nile ọ rụrụ n’ụwa ma nwụọ hapụ ibilite n’ ọnwụ, okpukpe anyị na-ekpere ya aka-abụ nke olile anya adịghị n’ime ya.
Ọ bụrụ na anyị atụgharịa uche anyị n’ọnọdụ ndi na-eso ụzọ ya mgbe ọ ka nọ n’ili, anyị ga-ahụta na ha nọ n’onọdụ jebe ejebe adighị mma nọdụ anọdụ adighị mma. Ha nọ n’ime egwu mọbụ ụjọ. Ụfọdụ ha gara zokpoo onwe ha ka ihe mere nna ha ukwu gharakwa ime ha. Onwere ike bụrụ na ha na-ajụrịta onwe ha “kedu uru osiso anyị soro nwokea bara anyị?” Ụfọdụ n’ime ha nwere ike na agbakọ ego ole ha ka-enwetago na ọrụ ha dị iche iche, ha hapụrụ wee soro Jizọs. Ụfọdụ ka nwekwara ike na-ajụ ma aka nwere ego fọrọ n’akpa ha ka, ka eweta ya kerie ka onye ọbụla zọba isi onwe ya, ebe ọbụ na ọgụ adaala.
Mana mgbe Jizọs biliri n’ọnwụ ka ha matara n’eziokwu, n’ọbụ n’isi ka eji ekwe ụka akara aka. Ugbua ka ha matara na mkpakana ga-ama ọzọ mana ọzọ di mgba ga-anakwa. Ugbua ka ha matara na onye ha na-eso bụ dike n’agha. Kịta ka ha ghọtara na aka ka aka na-agbaji aka. Kita ka ha mara na ugo eberela na mgbagbu. Kita ka ha kwebere ‘aliloya’ were mara na onye ji Chukwu ji ihe.
Jizọs kunie, ihe ndi ọzọ adaa. Ima atụ, taa bụ abalị mbụ n’ọnwa anọ n’afọ (April 1) ụbọchị ana echeta maka ndi nzuzu n’ụwa nile, mana ebe emume ncheta mbilite n’ọnwụ Jizọs nka afọa dabra n’ime ya, ndi nzuzu aghọọla ndi amamihe! N’otu aka ahụ, mgbe anyị were ntụkwasị-obi anyị nile tinye n’ime Jizọs, onye nke nwụchara ma bilite n’ọnwụ, nsogbu anyị nile ga-agbalaga.
Ka anyị ekwekwala ka njọ anyị kewaa anyị na Jizọs. Ohere ka dịrị anyị inabata ya ugbua m’ọbụrụ na anyị emebeghị nkea. Na-agbanyeghị ka njo anyị si bue ibe, ka anyị soro Meeri Magịdalinu chọọ ma gakwuru Jizọs bụ onye siworii n’onwụ kunie, Ọ ga-agbaghara anyị, Ọ ga-azọpụta anyị. Ọ hụrụ anyị bụ ndi njo n’anya mana Ọ kpọrọ njọ anyị asị.
Ka anyị mee Isita nke ọma! Ya gazienu!! Aliloyaa!!!
Previous Post: Yurop na-achọ imepe ụlọ erimeri okpuru mmiri nke mbụ
Next Post: Ista:Enugwu gwụrụ na Shoprite